ဟာသ – Page 10 – PoPinVdo
March 1, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဟာသNo Comment on ​တောဂိုက်​ဖြင့်​ဖုန်းသုံးနည်း
(1) Facebook acc ဖွင့်လျှင် နာမည် လှလှ များ ရွေးပါ ဥပမာ – Cuttie Kg lay (2) ဖုန်းကို ညာဘက် အပေါ်ကို မြောက်၍ selfie…
ဖိုတိုရှော့ သရဲများလက်ထဲ ဘော့လုံးသမားများ ရောက်သွားသောအခါ
March 1, 2018 March 1, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဟာသ / အားကစားNo Comment on ဖိုတိုရှော့ သရဲများလက်ထဲ ဘော့လုံးသမားများ ရောက်သွားသောအခါ
ဖိုတိုရှော့ သရဲများလက်ထဲ ဘော့လုံးသမားများ ရောက်သွားသောအခါ ခွီးလိုက်ပါဦး ပရိတ်သတ်ကြီး မသိဘူးတီးမယ် ဘယ်လိုတွေတောင်လဲ ဘောလုံးကွင်းထဲခွေးခေါ်လို့ရဘူးလေ ကိုတွေကအာ့လိုသန်တာ မြက်ပင်တွေသိပ်မသန့်ဘူး Credit: လှ​တောသား
February 28, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဟာသNo Comment on Skillကြမ်းတယ်​ဆို😳😳😳
သမီးဖြစ်​သူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲအပြီး… အမေဖြစ်​သူက “သမီး မင်္ဂလာဦးည ဘယ်လိုဖြစ်လဲ အမေ့ကို ပြောပြ.. ပြောရမှာ ရှက်ရင် စကားဝှက်သုံးပြီး စာပို့ လိုက်” ” ဟုတ် အမေ” နောက်ရက်ကျ သမီး ဆီကစာတစ်စောင် ဝင်လာတယ် “အမေ…
အလပ်ကြီးရှိသေးတယ် တခုလပ်မတဲ့…. ပြလိုက်ချက်.. မျက်လုံးတွေတောင် ပြာတောက်သွားတယ် …
February 28, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဟာသNo Comment on အလပ်ကြီးရှိသေးတယ် တခုလပ်မတဲ့…. ပြလိုက်ချက်.. မျက်လုံးတွေတောင် ပြာတောက်သွားတယ် …
ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်>>> Share from:tawthu.com
February 27, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဂျင်း / ဟာသNo Comment on 😨”ဘီလူးဖျက်တဲ့ရွှာ😨
ပခုက္ကူမြို့အနီးခြောက်ကန်ကျေးရွှာတွင် နေ့လည်12:00နာရီအချိန်မှဖြစ်ပွားခဲ့သော ( ဖြစ်ရက်မှန်ပါ )သတိကြောက်တတ်သူများ နှလုံးရောဂါရှိသူများမဖတ်ရ ဒီဖြစ်ရပ်မဖစ်ပွားခင်မှာတော့ကြေးငှက်သံလေးတွေနဲ့ အလုပ်သမားတွေကလဲသူ့အလုပ်သူလုပ်နေကျပီး သာယာအေးချမ်းနေတာပေါ့ဗျာ အဲအချိန်မှာဘဲ မထင်မှတ်ထားတဲ့ကံဆိုးချင်းတွေရောက်လာတော့တယ်ဗျာ ဟိုးအဝေးစီကနေအသေခံတပ်သားတွေဗုံးတွေပိုက်ပီး ရွှာကခြံစီးရိုးတွေကိုပြေးဝင်တိုက်ပီးဖျက်စီးပစ်ကျတယ် ခြုံစီးရိုးတွေလဲပျက်စီးသွားတော့ဘီလူး10ကောင်လောက်ရွှာထဲဝင်လာပီးသူတို့ရဲ့လက်အကြီးကြီးတွေနဲ့ရွှာကအိမ် လေးတွေအဆောက်ဦးတွေကိုဖျက်စီးပစ်တော့တာဘဲဗျာ သူတို့ကအုပ်စုလိုက်နဲ့ဝိုင်းပီး1အိမ်1အိမ်ကိုခဏလေးအတွင်း မှာဘဲဖျက်စီးပစ်ကျတာအတော်ကိုရက်ဆက်ကျတာ😖 ပီးတော့မိုးမရွှာဘဲနဲ့လျှပ်စီးတွေလှပ်လာပီးမိုးကြိုးတွေ3ချက် လောက်ဆက်တိုက်ပစ်သွားတယ်ဘာဖစ်တာလဲဆိုပီးတော့…
ကုလားမလေးနဲ့ ဂျပန်ကြီးရန်ဖြစ်ကြတာတဲ့ 😱😱😱
February 27, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဟာသNo Comment on ကုလားမလေးနဲ့ ဂျပန်ကြီးရန်ဖြစ်ကြတာတဲ့ 😱😱😱
ကုလားမလေးနဲ့ ဂျပန်ကြီးရန်ဖြစ်ကြတာ ကုလားမလေး ကပြောတယ် (အာဒေ စွန်နားအချား ကစ်သနယ်) ဂျပန်ကြီးကဒေါသထွက်ပြီးပြန်ပြောတယ် (ဟာဒီယာသိုကိုစိုင်းမာ ရောဒေါချီအာမိုနာတို) ကုလားမလေးငိုသွားတာပေါ့ ဂျပန်ကြီးကအာ့လိုပြောတော့ အဲ့တာနဲ့ ကုလားမလေးက ပြန်ပြောတယ် (လက်ချက်မီကက်စီး စွန်နားဟယ် ဂျွတ်သားမို့ကို့ ဖွတ်သားဟယ်) အဲ့မှာဂျပန်ကြီးကဒေါသထွက်ပြီး…
မယ်သီတာကို ချစ်တဲ့ ဒဿဂီရိရဲ့ အချစ် ကို နယူတန်ရဲ့ သီအိုရီ နဲ့ ကြည့်လိုက်သော အခါ…
February 24, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ကြားရသိရသမျှ / ဗဟုသုတ / ဟာသNo Comment on မယ်သီတာကို ချစ်တဲ့ ဒဿဂီရိရဲ့ အချစ် ကို နယူတန်ရဲ့ သီအိုရီ နဲ့ ကြည့်လိုက်သော အခါ…
နယူတန်ရဲ့ သီအိုရီ နဲ့ ဒဿဂီရိရဲ့ အချစ် ကို ယှဉ်ကြည့်လိုက်သော အခါ နယူတန်ကပြောတယ် … ” သက်ရောက်မှု့တိုင်းမှာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ရှိတယ် “တဲ့ ဒဿ က ရယ်တယ် … ”…
အမရေ… ကျွန်တော်လေ ဘော်လီ ဝယ်ချင်လို့ ခဗျ ”
February 23, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဟာသNo Comment on အမရေ… ကျွန်တော်လေ ဘော်လီ ဝယ်ချင်လို့ ခဗျ ”
“ဟယ်.. မောင်လေး ဝတ်ဖို့လား ” ” ဟုတ်… အဲ… ဟုတ်ပေါင် ကျော်က ဘာလို့ ဘော်လီ ဝတ်ရ မှာလဲဗျ ” ” ဒါဆို ဘယ်သူ့ အတွက်လဲ ငါ့မောင်ရဲ့ ”…
February 23, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဟာသNo Comment on မိန်းမများမှတ်ဥာဏ်ကောင်းပုံ
တခါက ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော ဆရာဝန်ကြီးဆီသို့ အမျိုးသမီး လူနာ တဦး ဆေးခန်း လာပြသည်။ ဆရာဝန်ကြီးက ရာဘာလက်အိတ်ကို လက်မှာစွပ်ပီး လူနာကို ကြည့်လိုက်ရင်းက နောက်ပြောင်လိုသည့် သဘောဖြင့် .. ” ဒီလက်အိတ်ကို ဘယ်လို…
လှတောသူ မရှယ်ခိုင်ရဲ့ မန္တလေးက “ထာဝရပိုးထည်ဆိုင်” ကြော်ငြာလေး အားပေးသွားကြပါဦး…
February 23, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဆယ်​လီ / ဟာသNo Comment on လှတောသူ မရှယ်ခိုင်ရဲ့ မန္တလေးက “ထာဝရပိုးထည်ဆိုင်” ကြော်ငြာလေး အားပေးသွားကြပါဦး…
မန်းလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၅x၆၆ ကြား မနော်ဟရီလမ်းပေါ်က ထာဝရပိုးထည်တိုက်သို့ ရောက်ရှိပြီး စပွန်စာပေးသော ထာဝရပိုးထည်တိုက်အား ကျေးဇူးတင်စကား များနဲ့ အတူ ကြော်ငြာပေးသွားသော ဗွီဒီယိုဖိုင် အောက်ဆုံးတွင် ပါရှိပါသည် ။ ကြည့်ရှုအားပေးသွားကြပါဦးနော်…။ ========================= fb ပေါ်မှစကားပြောကြွယ်ပီး နိူင်ငံကျော်လူရွှင်တော်…